धनकुटाका ३२ वर्षीय आकाश पानीजहाज क्याप्टेन मात्रै बनेनन्, अहिले पानीजहाजको मालिक पनि - Nepal Insider
Home/समाचार/धनकुटाका ३२ वर्षीय आकाश पानीजहाज क्याप्टेन मात्रै बनेनन्, अहिले पानीजहाजको मालिक पनि
धनकुटाका ३२ वर्षीय आकाश पानीजहाज क्याप्टेन मात्रै बनेनन्, अहिले पानीजहाजको मालिक पनि
धनकुटाका ३२ वर्षीय आकाश घिमिरे श्रमिकका रुपमा खाडी छिरेका थिए । खाडीभित्र दु:ख मात्रै छैन, प्रशस्त अवसर पनि छ । त्यही अवसर छोप्दा श्रमिकबाट आकाश पानीजहाज क्याप्टेन मात्रै बनेनन्, अहिले पानीजहाजको मालिक पनि हुन् । पुरानो दुबई हेर्ने भए बर दुबई जाऊ । नयाँ दुबई हेर्न मरिना । यही मरिनाले नै संसारलाई दुबईतर्फ आकर्षण गर्दैछ । आनन्द लिन भौतिक रूपमा तयार गरिएको साधन यही छ । उच्च सुविधायुक्तको व्यापारिक मल मात्रै छैन । हरेक क्षेत्रमा नाम कमाएका हस्तीहरूको अपार्टमेन्ट यही छ । ती अपार्टमेन्ट समुद्रमा कमलको फूल फुलेजसरी लहरै उभिएका छन् ।
त्यही समुद्रको किनारमा ‘दुबई मरिना एच क्लब’ छ । जहाँ ५ सय ५० भन्दा बढी सुविधायुक्त पानीजहाजलाई आकर्षक रूपमा पार्किङ गरी राखिएका छन् । जसमध्ये एउटा ‘मेजेस्टी ६१’ नाम गरेको डीपी २१७६ नम्बरको पानीजहाज छ । त्यसका २५ प्रतिशत मालिक हुन्, आकाश घिमिरे । नाम्जाङ सिदुवा–धनकुटाका ३२ वर्षीय आकाश कसरी विश्वस्तर क्लब मरिनाका सदस्य भए ? कसरी जहाजको मालिक बन्न पुगे त ? यसको कथा बुझ्न दुबई–कतारको १२ वर्षे दु:ख संघर्ष खोतल्नुपर्छ । यो सामग्री होम कार्कीले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्।
आकाश एकैपटक सेतो सर्ट, कालो पाइन्ट र क्याप्टेनको टोपी लगाउन दुबई छिरेका थिएनन् । सन् २००६ तिरको कुरा हो । भर्खरै १२ कक्षा पास गरेका थिए । हातमा स्काभेटर चलाउने सीप मात्रै थियो । रिभर ओभरसिज म्यानपावरलाई ६५ हजार रुपैयाँ बुझाएर कतारमा स्काभेटर चलाउन उडे । सम्झौता गरेअनुसार कम्पनीले स्काभेटर चलाउन दिएन । नीलो डांग्री (पोसाक) दिएर लेबरमा बेल्चा हान्न पठाए । कतारी कम्पनीमा ६ महिनाभन्दा बढी बेल्चा हान्नुपरेन । ‘म अंग्रजी राम्रैसँग बोल्थें । कम्पनीले मलाई साइडमा पठाएन । अफिसभित्रै सहयोगी बनायो,’ उनले भने, ‘अफिसभित्र छिरेपछि काम सिक्न थालें । मलाई खरिद गर्ने विभागमा राखियो । कम्पनी छोड्ने बेलासम्म हर्ताकर्ता भइसकेका थिएँ ।’
कतार दुई वर्षसम्म टिके । सवारी चालक अनुमति बनाइसकेका थिए । नेपाल फर्के । नेपाल फर्केको दुई महिनाभित्रै दुबई गए । ‘दुबईमा आफन्त थिए । के भिसामा आउने भनेर सोधे । उनीहरूले कतारी लाइसेन्स भए ड्राइभिङ काममा आइज । सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘ड्राइभिङ काममै गए ।’ संयोगले उनी दुबई मरिना एच क्लबमै गाडी चलाउन पुगे ।
ड्युटी साँझ ६ बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म हुन्थ्यो । कलेजको समय ९ देखि ६ बजेसम्म । काम सकिनासाथ कलेजका लागि तयार हुन्थे । ‘कैयांै दिनसम्म त म कोठामा पनि गइनँ । गाडी नै मेरा लागि कोठाजस्तो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मसँगै आउने साथीहरू अहिले पनि मेरो त्यतिखेरको मिहिनेतलाई सम्झन्छन् । अहिले सम्झँदा आफंैलाई लाग्छ । मैले त्यो ६ महिना कसरी बिताउन सकें ?’
त्यसपछि उनी मरिना क्लबकोसदस्य भए । जहाजको मालिक बने । आकाश ‘मेजेस्टी ६१’ जहाजमा‘भीआईपी’ ग्राहकलाई ‘पर्सियन समुद्र’ डुलाइरहन्छन् ।
गुरु पूर्णीमा विशेष: कुटेर विद्यार्थीको ज्यान लिने शिक्षकलाई कसरी गुरु मान्ने ? – रबि लामिछाने
झापाका एक व्यक्ति करोडौं लिएर वेपत्ता, लगानीकर्ताको रुवाबासी
सल्यानमा भिषण आगलागीः २ जनाको मृत्यु, १ जना गम्भीर
मदन भण्डारीकी जेठी छोरी उषाकिरणले दासढुङगा हत्याकाण्डबारे खोलिन् नयाँ रहस्य ! (भिडियोसहित)